कहिले पाउँछन् प्रदेशले नाम र राजधानी ?
काठमाडौँ– प्रदेश सरकार गठन भएको १४ महिना बितिसक्दा पनि ४ प्रदेशले अझै नाम र स्थायी राजधानी पाएका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु एउटै दलका भए पनि विभिन्न नेताहरुको खिचातानीका कारण प्रदेशले नाम पाउन नसके...
कति सम्भव छ फोरम–राजपा एकता ?
काठमाडौँ— अलग मधेसको माग गरेर राजनीति गरिरहेका सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आएपछि मधेस केन्द्रित दलहरु तातेका छन् । दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले त एकअर्कासँग एकीकरण ग...
काठमाडौं– राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो सरकारप्रति निकै आक्रामक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति उनी आक्रामक हुनुको एउटा प्रमुख कारण हो, राजपाबाट निर्वाचित सा...
१३ चैत, २०७५